Warbixinta Canshuur bixinta Donald Trump oo la faafiyey iyo Halis soo wajahday rajadiisa Dib u doorashada | Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la ogaaday inuusan bixin wax canshuur ah 10 sano oo ka mida 15 sano oo ka dambeeyay sanadkii 2000, isla markaana uu bixiyey oo kaliya $750 oo ah canshuurta laga qaado dakhliga qofka soo galo sanadii uu musharaxa ahaa iyo sanadkii ugu horeeyay ee uu madaxweynaha ahaa (2016, 2017).
Wargeyska caanka ah ee New York Times ayaa soo bandhigay warbixin fadeexad ku ah madaxwayne Donald Trump oo mar kale u tartamaya in dib loo doorto, wuxuuna wargeysku sheegay inuu helay macluumaadka 20 sano oo ku saabsan canshuur bixintii Donald Trump.
Macluumadkan uu daabacay wargeyska New York Times ayaa shaaca ka qaadaya in “muddo sanado ah uu madaxwaynaha ka baxsanayey bixinta canshuurta dakhliga sisagoo sheegayay inuu qasaaray lacag ka badan tan soo gashay si uu uga baxsado in la canshuuro.
Sida Musharaxixiinta Madaxweynayaasha Mareykanka caadadda u ahayd waxay soo bandhigaan canshuurka ay bixiyeen, laakiin Trump wuxuu si is daba joog ah u diiday inuu dadka la wadaago canshuurka uu bixiyo, isagoo mararka qaar ku doodaya in hay’adaha Maaliyadda ay dib u eegis ku hayaan.
Warbixintan ayaa dood weyn ka dhalisay dalka Mareykanka iyadoo Madaxweyne Trump uu degdeg uga jawaabay isla markaana sheegay inay been abuur tahay. “Waxaan bixiyey malaayiin Doolar oo canshuur ah, waadna arki doontaan marka aan canshuur celinta sameeyo,” ayuu u sheegay warbaahinta laakin markii la weydiiyey su’aal ahayd tirada lacagta uu bixiyey ayuu diiday oo goobtii uga dhaqaaqay saxafiyiinta.
Waa madaxwaynihii ugu horeeyay tan iyo sanadihii 1970-yadii kaasi oo aan shaaca ka qaadin canshuur celintiisa, taasoo ahayd arrin caado u ahayd siyaasiyiinta Mareykanka ee xilka ugu sareeya dalkaasi qabta, inkastoo aanay sharci ahaan waajib ku ahayn.
Wargeyska NewYork Times ayaa sheegay inuusan daabaceynin canshuur celinta Madaxweyne Trump si loo ilaaliyo isha uu warka ka helay, waxaana arrintan ka hadlay siyaasiyiin iyo madax badan. Trump oo ku faana inuu ahaa ganacsade guuleystay ayey arrintani ka dhigeyaa Ganacsade qasaare u joog ah ama canshuurta u diiday si xeeladeysan oo ah inuu qasaarayey sanad kasta.
Previous articleSafiirka Mareykanka oo shaaciyey Saddex Arrimood oo uu kula hehiiyay Ra’iisal wasaare Rooble (Akhriso)
Next articleAlshabaab oo Caleemo saartay Suldaanka Beesha Mudullood ee Jubbooyinka (Sawirro)